किन बढ्यो हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमा आकषर्ण?
आईपीओशेयर बजाररुरु जलविद्युततेह्रथुम पावर कम्पनीनेप्सेअपि पावर
शुक्रबार ७ जेठ, २०७८
पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकषर्ण बढ्दो छ। कुनै समय प्राथामिक बजारमा समेत बिक्री हुन छोडेको हाईड्रोपावर कम्पनीका शेयर पछिल्लो समय तानातान (खरिद चाप) हुँदै कारोबार हुने गरेको देखिन्छ। नेप्से सुचकमा करेक्सन आउदा समेत पछिल्लाे समय हाइड्रोपावरका शेयरहरु सर्किट लेभलमा कारोबार हुनुले आम लगानीकर्ताहरुको बढ्दो आकषर्णलाई पुष्टि गर्दछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ भने कयौँ व्यवसायमा संकटमा परेका छन्।
यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बजारमा भने लगातार वृद्धि हुँदै दैनिक नयाँ उचाई कायम गरिरहेको छ। बढ्दो बजारबाट राम्रो आम्दानी गर्ने उत्साह सहित नयाँ पुराना लगानीकर्ताले लगानी थप गर्दै बजारमा प्रवेश गर्दै गरेको देखिन्छ। अहिलेको बजारमा हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयरमा माग पक्ष बलियो भएको देख्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरलाई नजरअन्दाज गर्दै हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर खरिद गर्न तर्फ लालयित भएको पाइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफामा खासै सुधार भएको देखिदैन। तथापी लगानीकर्ताहरु हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर प्रति आकर्षत हुनुले अचम्मित पारेको जानकारहरुको भनाई छ।
किन भयो यस्तो?
घट्दो बजारमा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिन्थ्यो। बजार घट्दो क्रममा हुँदा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य, दास्रो बजारमा नै आधार मूल्य (१०० रुपैयाँ) भन्दा कम अर्थात ५० रुपैयाँमा नै पाईन थालेको देखि प्राथामिक बजारमा समेत शेयर बिक्री हुन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको उदाहरणहरु हामी सामु छँदैछन्। यो बढ्दो बजारमा तिनै सस्तो मूल्यका हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर खरिद गरेर लाभ लिने दाउमा लगानीकर्ताहरु रहेका देखिन्छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा गिरावट हुनुले हाईड्रोपावर कम्पनीको खर्चमा कम हुने हुँदा आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए। जसको कारण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित भएको हुन सक्ने उनको बुझाई छ।
हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पहिला घटेर धेरै तल झरेका थिए र बढ्नको लागि जरुरी भएको ढकाल बताउछन्। कोभिडको दास्रो लहरमा अन्य सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीको प्रभावमा परेतापनि हाइड्रोपावरको निमार्ण कार्य नरोकिने हुँदा खरिदचाप बढी भएको लगानीकर्ताहरुको तर्क छ। अर्कातर्फ भन्नु पर्दा हाईड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम भएको कारणले गर्दापनि यस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो रहेको अर्का थरी लगानीकर्ताहरुको भनाई रहेको छ।
अब के गर्नुपर्छ?
बजार बढ्नु समग्र रुपमा राम्रो हो। बजार कसरी बढेको छ? भन्ने बारेमा लगानीकर्ताले बुझ्नु जरुरी रहेको लगानीकर्ता ढकाल बताउछन्। शेयर बजार एउटा समुद्र भएको र समुद्रमा हामफाल्नु पूर्व गहिराई बारे जान्नुपर्ने ढकालको भनाई छ। बढिरहेको बजारमा लगानीकर्ताले धेरै सुझबुझका साथ मात्र लगानीको निर्णय बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। दोस्रो बजारमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले भन्दा राम्रो प्रतिफल वर्षेनी वितरण गर्ने कम्पनीको मूल्य तुलनात्मक रुपमा धेरै तल छ।
अहिले आधारभूत रुपमा बलिया कम्पनीभन्दा पनि ट्रेन्डमा चलेका कम्पनीमा लगानी गर्ने चलन बसेको छ। जसले गर्दा उनीहरुको लगानी जोखिममा रहने सम्भावना उच्च रहेको हुन्छ। अहिले विद्युत आम्दानी गरीरहेका हाइड्रोपावर कम्पनीभन्दा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको मूल्य बढेको देख्न सकिन्छ। त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा कति दिगो हुने वा नहुने भन्नेबारेमा लगानीकर्ताहरुले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक रहेको ढकाल बताउछन्। कस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ? भन्ने बारेमा बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। लगानीकर्ताहरुले बलिया र वर्षेनी राम्रो प्रतिफल वितरण गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
जसले भोलिका दिनमा केही न केही लाभ होस् र उक्त प्राप्त लाभले लगानीलाई सन्तोष प्रदान गरोस्। शेयर बजारमा हौसिएर भन्दा पनि सम्हालिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानी गर्नु पर्नेमा ढकालको जोड रहेको छ। शेयर बजारबाट कुनै पनि लगानीकर्ताले पछाडि फर्केर हेर्न नपर्ने ढकालको भनाई छ। ढकालले भने, ‘अहिले बजारको विषयमा जानकारी राख्ने धेरै माध्यमहरु छन्।’ लगानीकर्ताहरुले त्यसको सही सदुपयोग गर्दै कम्पनीको बारेमा विश्लेषण गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउछन्।
यसरी लगानी गरीयो भने बजारबाट सधै राम्रो हुन्छ। होइन जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनी बटुल्दै जाने हो भने बजारबाट कमाउने भन्दा पनि गुमाउने सम्भावना धेरै रहेमा उनी सचेत बनाउछन्। व्यक्तिगत तर्फबाट लगानीकर्ताहरुलाई कुन खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने भन्न नसकेता पनि लगानी गर्ने बेलामा सचेत रहनुस् भनेर सुझाव दिन्छन् उनी। बजार सधै बढ्छ भन्दा पनि घट्दो बजारबाट प्रतिफलको सुनिश्चित गरी लगानी गर्न उनी सुझाउछन्।
असोज २५ गतेदेखि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद निष्काशन गर्ने
सानिमा बैंककाे लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
माछापुच्छ्रे बैंकको लाभांश घोषणा
साहस उर्जाको आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा करिब १३ लाख कित्ता धेरै आवेदन, कतिले भरे आईपीओ?
३ वटा वाणिज्य बैंकले यो साता भित्रै लाभांश घोषणा गर्दै
किन लम्बिँदै छ हिमालयन र इन्भेष्टमेण्टको मर्जर?
आज बुधबार देखि साहस उर्जाको आईपीओ बिक्री खुला, कति दिने आवेदन?